Abavelisi beNtloko yeshawari yaseTshayina kunye nababoneleli-i-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Intloko yeshawari
Intloko yeshawari Abavelisi
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, umenzi ophezulu ochwephesha kunye nomthengisi ngaphandle e-China kwaye ube kumgca weplastiki ngaphezu kweminyaka engama-20 kunye neshishini lempahla yococeko iminyaka engaphezu kwe-10, Kwakhona. siye saqinisekisa ngenkqubo yokulawula umgangatho ye-ISO 9002S ekuqaleni kuka-1999. sivelisa zonke iimveliso zayo eTshayina. Iimveliso zethu iilayini zococeko ziquka oku kulandelayo: Intloko yeshawa, Ishawa yesandla, iiseti zikaloliwe zesilayidi, izibambi zeshawa, ithumbu leshawa, iseti yeshawa, isibiyeli sodonga lweshawa, izincedisi zeshawa, ishawari yebhafu, ishawa kunye nezincedisi zegumbi lokuhlambela ngokunjalo norhwebo nezinye iimveliso zempahla yococeko. kwi Made in China Website.
Imveliso yethu enkulu ziintloko zeshawa, ezahlulwe kakhulu zibe ziintloko zeshawari yezandla kunye neentloko zeshawari ezingaphezulu. Sinamakhulu eemveliso onokuthi ukhethe kuzo. Izinto eziphambili zekrwada yiplastiki ye-ABS ephezulu, ukumelana nobushushu obuphezulu, i-interface yendalo yonke, ifanelekile kwiintsapho ezininzi, iwaranti yeminyaka emibini. Ukuba unayo naziphi na iimfuno, ezifana nokhathalelo lwempilo, uxinzelelo, ukonga amanzi, ukuhluzwa, njl., wamkelekile ukubonisana, kwaye sizimisele ukukunika iingcebiso zobungcali.
Sinegunya elinamandla lokuphuhlisa uluhlu olubanzi lweemveliso ezintsha ngokobukhulu obahlukeneyo kunye neenkcukacha kubathengi bethu abadala ukhetho olwahlukileyo kwiimfuno ezahlukeneyo. Umgangatho ophezulu wentloko yeshawa uqinisekiswa bubuchwepheshe obuphambili, izixhobo zanamhlanje, kunye nolawulo lomgangatho kwinqanaba ngalinye lemveliso. Ngombono wethu wolawulo kunye nokukhula okuqhubekayo, iimveliso zithengiswa kakuhle kwimarike yehlabathi, eye yazuza udumo oluhle kakhulu. Ishishini lethu ligxile kwi-R&D, iOEM, iODM.
Hamba kunye neHuanyu, ukhetho lwakho oluhle
Umdibaniso oMtsha weShower Black
Sibonelela ngeshawari eNtsha emnyama edityanisiweyo enemilo ekhokoli, indawo yokuphuma amanzi enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka, engwevu, kunye nomphezulu ofakwe ichrome. Ithandwa kakhulu kwimarike yoMbindi Mpuma, ngexabiso eliphantsi kunye nomgangatho olungileyo. Ixesha layo lewaranti liyiminyaka emi-2, kwaye ubomi benkonzo bungaphezulu kweminyaka emi-5.
Umdibaniso we-Black Matte Shower
Sibonelela ngeshawari ye-matte emnyama edityanisiweyo enemilo yeconical, indawo enkulu yokuphuma amanzi eluhlaza, ngwevu, kunye ne-chrome-plated top. Ithandwa kakhulu kwimarike yoMbindi Mpuma, ngexabiso eliphantsi kunye nomgangatho olungileyo. Ixesha layo lewaranti liyiminyaka emi-2, kwaye ubomi benkonzo bungaphezulu kweminyaka emi-5.
Ukucwenga kunye noMdibaniso weshawari emnyama
Sibonelela ngePlating kunye neshawari emnyama indibaniselwano enemilo yeconical, indawo enkulu yokuphuma amanzi aluhlaza, ngwevu, kunye ne-chrome-plated top. Ithandwa kakhulu kwimarike yoMbindi Mpuma, ngexabiso eliphantsi kunye nomgangatho olungileyo. Ixesha layo lewaranti liyiminyaka emi-2, kwaye ubomi benkonzo bungaphezulu kweminyaka emi-5.
Umdibaniso weshawa yepleyiti yobuso enkulu
Sibonelela ngeshawa yepleyiti yobuso enkulu edityaniswe nemilo ekhokoli, indawo enkulu yamanzi aluhlaza, ngwevu, kunye nomphezulu ofakwe ichrome. Ithandwa kakhulu kwimarike yoMbindi Mpuma, ngexabiso eliphantsi kunye nomgangatho olungileyo. Ixesha layo lewaranti liyiminyaka emi-2, kwaye ubomi benkonzo bungaphezulu kweminyaka emi-5.
Intloko yeshawari encinci enemisebenzi emithathu
Imisebenzi emithathu encinci yentloko yeshawari encinci, i-beige kunye nepaneli emhlophe enendawo yokuphuma yamanzi emnyama, ikhethekileyo kakhulu, iindlela ezintathu zokukhupha amanzi zonyusa amava abathengi.
Intloko encinci yeshawari ePhezulu eneNqanaba laManzi
Ubungakanani obuncinci be-electroplating encinci yentloko yeshawari ephezulu yexesha elinye iphaneli yokubumba kunye nomngxuma wokuphuma kwesilivere, umgangatho ophezulu kunye nexabiso elikhuphisanayo kakhulu.Wamkelekile ukuba uthenge Intloko yeShower encinci encinci kunye ne-Hard Water Outlet evela kuthi.
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Intloko yeshawari zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Intloko yeshawari uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.